कांग्रेसले गोला प्रथाबाट चुन्ने भयो अन्तरिम नेतृत्व - अभियान खबर
२६ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सहमतिकै आधारमा भदौ २० भित्र अन्तरिम संरचना बनाइसक्ने भएको छ ।
आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अन्तरिम संरचना निर्माणबारे निर्देशिका पारित गरेको छ । यसअनुसार अन्तरिम संरचना निर्माणका क्रममा कतै पनि चुनाव हुने छैन, बरु गोला प्रथाबाट नेतृत्व चयन हुनेछ ।
पार्टीलाई संघीय ढाँचामा लैजानका लागि कांग्रेसले संघीय निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, स्थानीय तह र वडा तहमा अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्छ । क्षेत्रीय सभापति चयन गर्दा यदि १३ औं महाधिवेशनबाट चुनिएका एक जना मात्र क्षेत्रीय सभापति छन् भने उनी स्वतः सभापति हुनेछन् । यदि दुई वा सो भन्दा बढी क्षेत्रीय सभापति छन् भने कार्यकालको वरिष्ठताका आधारमा चयन हुनेछ ।
कार्यकाल बराबर भए क्षेत्रीय प्रतिनिधि संख्या र त्यो पनि बराबर भए क्रियाशील सदस्य संख्याका आधारमा चयन गरिनेछ । यो पनि बराबर भए गोला प्रथा हुनेछ ।
स्थानीय तहको प्रमुख, केन्द्रका आधारमा छनोट हुनेछ । जुन स्थानमा केन्द्र छ, त्यही तत्कालीन गाविस वा नगरपालिकाका प्रमुख अन्तरिम संरचनाको प्रमुख हुनेछ ।
निमर्लाको लागि न्याय माग्दै अधिकारकर्मी माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन
Posted on August 25, 2018 August 25, 2018 Author abhiyaan
काठमाडौं । निर्मलाका लागि न्याय भन्दै नागरिक समाजले शनिवार १२ बजे माईतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेको छ। निमर्लाको लागि न्याय माग्दै अधिकारकर्मी माइतीघर मण्डलाबाट बानेश्वर चोक पुगेका छन् । शान्तीपूर्ण र्‍यालीमा विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्ति, अधिकारकर्मी, चिकित्सक, अवकास प्राप्त कर्मचारी, विद्यार्थी, संचारकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिती रहेको छ । सहभागीले न्याय सम्बन्धि बिभिन्न पम्प्लेट प्रदर्शन गरेका छन् । […]
वि.सं. २०७६ असार १६। सोमबार। इ.स. २०१९ जुलाई १।राशिफल
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। अरूलाई दिएको वचन पूरा गर्न नसकिएला। परिस्थितिवश योजना परिवर्तन हुन सक्छ। अर्थ अभाव देखिए पनि आफ्ना सूचना सम्बन्धी गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला। आजको श्रमले भविष्यमा भने नाम, दाम र प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। […]
काठमाडौँ । प्रहरीले बलात्कारको आरोपमा रामेछापका एकजना स्थानीय नेतालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा उमाकुण्ड गाउँपालिका कुभुकास्थलीका ४० वर्षीय संगीत सुनुवार रहेका छन् । सुनुवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थानीय नेता समेत हुन् । १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा सुनारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख सन्तोषकुमार भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । […]